RAVELOSON CONSTANT : MILA MAILO ISIKA – MyDago.com aime Madagascar
Manana kandidà isika izao hoy ny Ct Raveloson Constant teny amin’ny Magro Behoririka dia Ramatoa Lalao Ravalomanana Rakotonirainy , izay tsy maintsy tafita ny antsika. Ilay mitaditady hoy izy hoe hanodinkodina miankavia sy miankavanana satria ny ao an-tokantranony liam-pahefana dia efa mizarazara ny kandidà. Noho izany dia tsy maintsy mailo isika ary jerena akaiky ilay fahotana 10 nataon-dRajoelina. Misy hoy ity mpanao politika ity kandidà iray nilaza fa efa niresaka tamin-dRajoelina amin’ny filatsahany ho kandidà, f’angaha hoy izy ianao manao izany fa tokony ho “neutre”. Tsy azo ankinina ho azy samirery hoy Constant satria izahay manana kandidà ary ho entinay amin’ny fahamarinana Momba ny voalazan-dRamatoa Samoura Fatma milaza fa na 10% aza ny mifidy dia ekenay dia nambarany fa enga anie ka ho vava fotsiny fa rehefa ny Malagasy no manao hoe: izahay tsy hifidy hoy ity olomboantendry ity raha tsy amin’ny rariny sy hitsiny io , tsy ianao no hanery anay hifandramatra an-trano ka 10% no mifidy dia ataonao io. Manana kandidà isika hoy izy ary ataontsika ao anatin’ny tena izy, ilay hoe “bien élu” izany hoe voafidy ao anatin’ny tsy azo kianina. Momba ny lisim-pifidianana dia nanafatra ny vahoaka ny tenany mba hijery izany. Jereo hoy izy ny anaranareo raha ao , fa jereo ihany koa ny anaran’olona nampiampiana foana, ny adiresin’ny sasany ao amin’ny fokontany. Ataontsika mahita 10% izy hoy Constant fa atao misy dikany izany. Tandremo manao ohatry ny nahazo an-dRajoelina tamin’ny 2006. Rehefa nidongy Antananarivo , tsy nisy antsasaky ny mpifidy no tonga nifidy azy. Zara raha nisy ampahaefany.Totohondry efa mivokina ny antsika ho izy ka miandry izay hitotonany. Mitily , mijery ary mihaino antsika ny iraisam-pirenena ary mitsapatsapa hoe ireo ve tsy hifidy. Noho izany hoy ity mpanao politika ity dia anjarantsika ny mampiseho hoe hainay io ,vitanay io.
MILA MAILO ISIKA
RAVELOSON CONSTANT : ISIKA IZAO NO FANASIN’NY TANY
Auteur Solo Razafy*Publié le 22 avril 2013 Catégories Politique
10 pensées sur “RAVELOSON CONSTANT : MILA MAILO ISIKA”
Somary tsy Azoko tsara ilay kabary na votoatin’dahatsoratra. N’a izany n’a tsy izany dia Lala RAVALOMANANA ihany ny anay fa tsy Rakotonirainy Lalao.
Ataovy mazava aloha ny resaka TIM, fa izany no tena zava-dehibe amin’izao fotoana ! Sa ny TIM ao amin’ny movansa tsy dia mazoto loatra hiady amin’i Raharinaivo ?
Malaza miara-misakafo sy ny karazany ry zareo, fa miankina amin’io raharaha TIM io koa anie ny Fiainam-pirenena ê !
Mba tsara ihany koa ny Filoha Ravalomanana, manome ny heviny momba an’io ! Aiza ka olona hafa ery indray no lasa miaro an-dRamatoa Lalao Ravalomanana, fa ny ao an-trano tsy nisy niraharaha !
Ny sasany ao amin’ny CENI-T faly mahazo 7.000 $ isam-bolana fotsiny !Na mbola hitarazoka aza io fifidianana io, tena mety aminy mihintsy !
Ary mba efa mahazo miteny ao amin’ny RNM sy TVM ve ianareo, sa dia natao ho an’ny foza fotsiny io ?
Tsy ny fanaovana praopagandy ihany anie no hilàna mandray fitenenana ao ê ! Zo-nareo ny manazava amin’ny vahoaka ny zava-misy ao an-toerana amin’ny alàlan’ny RNM sy TVM !
22 avril 2013 à 18 h 33 min
Somary tsy azoko tsara ilay kabary na votoatin’dahatsoratra. Na izany na tsy izany dia Lalao RAVALOMANANA ihany ny anay fa tsy Rakotonirainy Lalao.
22 avril 2013 à 18 h 38 min
Nalaina tahaka tamin’ny Lalàna frantsay ny Lalàna malagasy ! Marina mihintsy ny voalazan-dry zalahy ao amin’ny forum TIM, raha nentinao tao io resaka io !
Hilary Clinton, Thatcher, Michèle OBAMA, …Christine BOUTIN née Martin, Elisabeth GUIGOU née VALLIER, Martine AUBRY née DELORS !!!
Maninona ny Première Dame, no terena tsy amin’izay tsy tiany ho atao ? Ilay Yvette angaha nanambady ny anadahiny no hoe SYLLA no anarany ????
Lalao RAVALOMANANA no nahafantaran’ny olona rehetra azy atramin’izay, dia zoany ny mitondra an’io anarany io raha izay no tiany ê !!!
Fanitsiana : ..no tsy maintsy terena amin’izay ..! Entin’ny fahasosorana loatra ! MDR !!
22 avril 2013 à 21 h 34 min
Ny mahery tsy maody hono tsy ela velona koa marina ny anao RA-Constant.
Aza tezitra e!!fa tokony hatao ahagaga ve izany ry zareo a???
VONGAn’INONA DAHOLO IRETO IZY NO HANAIKINAIKY FOTSINY IZAO
HAGEGENA REHETRA IZAO HONO???MAMPI-TENY NY MOANA ILAY FITAVOZAVOZANA SA TENA
VOAVIDY LAFO????DIA INONA KOA eeeeeeeee sao dia tokony hafa koa no hilatsaka fa tsy NENY ô???
tonga dia lazao ny marina ry MPITARI-BATO VILAM-BAVA ISANY Ô??ampiseho daholo ny tsy fankasitrahana
ilay olona fa VAVA TSY MILAOKA anie ny an’ireo MPITARIKA IZAY MISOLELAKA MAFY AO IREO e!!!!
Efa vita indray ny nilany ilay fandrebirebena satria efa vita ilay fifampihavavana izay tokony nahatongavan’i dada
teo dia mitady lalana hafa @’izay,MANAO TOETRA TSY ZAKA, TSY MATAHOTRA IZAY HATAHORANA DAHOLO!
MBOLA HO TSARAIN’NY TANTARA EO DAHOLO FA AZA TAITRA eeeeeeeee
AVELA HANARA-PO MANAO IZAY DANIN’I KIBONY MIHINTSY NY FOZA DIA FALY MISOLELAKA MAFY ANY NY
SASANY! MANAO MPAMOSAVY MALENY , ny ao an-trano ihany no mandripaka.MAHONENA!!!
23 avril 2013 à 3 h 58 min
Fa inona ny olan’ê? resaka anarana entina mandritra ny éléctions??
Tsy andron’ny toram-po sy fiadian-kevitra amin’ny anarana izao, Politika avo lenta no apetraka!
raha io no mety hahatafa ny 1er tour dia VITA
Ka izay indrindra no tena ialaina nefs toa hoe ilay Rakotonirainy lalao no hanaovana fifidianana. tena lazaiko anareo fa tsara io Ramatoa Ravalomanana io saingy tsy fantatry ny any lavitra any izany hoe Rakotonirainy Lalao. ilay jeneraly iry koa aza mety asain-drajoelina hilatsaka hanakorotanana ny ain’ny mpifidy, Mila mailo isika. Lalao Ravalomanana ihany ny antsika @ ity fifidianana ity. Dia tena tsy afakamiady mihitsy ve ny ankolafy hoe i Ravalomanana no hosoratana eo ?
Mety hiafara @ ity ihany isika…..
Fanta-bahoaka foana io na antsoina hoe Bezinga aza
Mazava ny resaka! Ilay anarana Ravalomanana mihitsy no atahoran’ny olona tsy dia madio loatra eto amin’ny firenena. Izay mamofompofona Ravalomanana, dia ezahina ho potehina hatramin’ny fakany. Tsy navela hiditra eto ity filoha teo aloha ity, mba hiatrika ny fampihavanana nataon’ny FFKM ary tsapa, fa nisy fepetra noraisina mihitsy hatramin’ny fametrahana ny tena anarana any amin’ny bileta tokana izay afahan’ny vahoaka misafidy ireo olona ho fidiany. Mety efa fepetra efa ela io, saingy mahalasa saina ny maro ihany ny mety ho fipetraky izay, satria izay anarana efa nahafantaran’ny maro an’ilay olona iray izany, dia ho fafana tsy ho fantatry ny mpifidy, izay hiteraka korontan-tsaina ho an’ny mpifidy, satria mety tsy ho hainy intsony izay ho tena tiany noho ny tsy fahafantarany ilay olona tiany nefa tsy fantany anarana. Tsy voatery ho nahita endrika ilay kandida avokoa ny vahoaka rehetra, fa ny anarana no henony ka tiany, nefa tsy maintsy hovaina ao anatin’ilay bileta tokana. Rehefa mandinika ny maro, dia ilay anarana Ravalomanana mihitsy no tsy zakan’ny vavon’ny sasany e. Na hiala aza io anarana Ravalomanana io, ka hiova bezinga, rehefa ao amin’ny vahoaka ny fitiavana azy io dia fidiany foana, fa be ny olona ho tapaka lalan-dra eto, raha lany eo ny vadin’I Bezinga a. Sa ahoana hoy ianareo?
24 avril 2013 à 4 h 26 min
Misaotra anao manazavazava, ry Lazalazao.
Tsy atao tsinotsinona,
fa i risara baomba mitovy anarana ao an-daCaserne ao –
miaraka @ média oranze,
efa manomana stratégie masiso
tandremo: handotoana ity anarana itovizan’ê!
Précédent Article précédent : Analyse juridique de la liberté d’aller et de venir et de son application au cas Lalao Ravalomanana
Suivant Article suivant : RANDRIANARISOA GUY RIVO : tsy maintsy mandresy isika